Duqa Magaalda Muqdisho oo qaabilay Wafdi ka socda UNHCR Maxayse ka wada hadleen? — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Duqa Magaalda Muqdisho oo qaabilay Wafdi ka socda UNHCR Maxayse ka wada...
Duqa Magaalda Muqdisho oo qaabilay Wafdi ka socda UNHCR Maxayse ka wada hadleen?
Kulankan oo ay muhiimadiisu aheyd sidii loo xoojin lahaa xalka gaarista arimaha barakacayaasha iyo sidii ay u heli lahaayen nolal dagan ayuu guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) la qaatay agaasimaha hey’ada QM u qaabilsan qaxootiga aduunka ee UNHCR gaar ahaan Bariga iyo geeska Africa Mss. Clementine Nkweta-Salami.
Masuuliyiinta hey’ada UNHCR iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa arimaha badan isla meel dhigay oo ay kamid ahaayeen horumarinta wada shaqeynta maamulka gobolka Banaadir iyo HNHCR, dardargalinta mashaariicda lagu taageeraayo dadka barakacayaasha ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo lagu qiyaasay iney kor u dhaafeen ( 500.000) qof, sidoo kale waxaa kulan kaan looga hadlay shaqa abuurka dhallinyarada iyo dhismaha xarumaha danta guud.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) waxa uu tilmaamay in madaxda hey’adda UNHCR ay islameel dhigeen arima muhiim ah.
Previous articleDEGDEG:Puntland oo Tababar u soo xirtay Ciidamo Cabsi weyna ku abuuray Soomaliland
Next articleShir degdeg ah oo la xiriira xayiraadii Maanta sheikh Shariif oo ay isugu imaanayaan Xasan Sheekh, Sh. Shariif iyo Xisbiyada siyaasadda
WAR DEG DEG AH:Madaxweyne Farmaajo oo go’aan Geesinimo leh qaatay Jinsiyadiisi...
Kenya oo war ka duwan kii Villa Soomaaliya ka soo saartay...